WAA CEEB IYO FADEEXAD IN MASUULIYIIN QARANKA KA TIRSANI KU LUG YEESHAAN DHACA MUCAAWINOOYINKII MASAAKIINTEENA LOO KEENAY | Anti-Tribalism
← Daawo+Sawiro:Xafladii maamuka khaatumo ee magaalada Moqdisho
Mahiga oo Beeniyey Warar uu Dhowaan Sheegay oo Dareen Weyn Kiciyey →
WAA CEEB IYO FADEEXAD IN MASUULIYIIN QARANKA KA TIRSANI KU LUG YEESHAAN DHACA MUCAAWINOOYINKII MASAAKIINTEENA LOO KEENAY
March 10, 2012 Waxay ahayd usbuuc ka hor markii Xaafada Xero Awr lagu soo rogay gawaadhi raashin mucaawino ah oo lagaga iibinayay dadka degan Xaafadaas, inkasta oo dadka qaarkii ka gadoodeen oo ay xaaraan ku tilmaameen in la iibsado raashinkaas ay ku dul qoran tahay waa mucaawino ee lama iibsan karo. Waxa dhacday in maalin ka dib raashin kale oo aad u badan lagu roogay Bakhaaro ku yaal Suuqa Idacaada iyada markii shacabku ka warheleen ay ka gadoodeen in la dhaco mucaawiino ilaahay Dartii ay ugu soo caawiyeen dadkeena baahan ganacsato Carab ah oo ka damqaday faqrida iyo baahida haysata Umadeena, halka kuwii xilka u hayay ee ay ahayd inay caawimo dadkooda baahan u raadiyaan ayaa iyagii ka dhacaya. Raashinkaasi masaankiinta loogu talo galay waa cadaab ay cunayaan cida dhacda iyo cida ka iibsataaba ee ogi.
Dadkeenu ha iska jiraan wixii raashin ah ee ay u maleeyaan in mucaawiino uu yahay inayna iibsan oo ay ku takooraan cida iibinaysa. Ceebtaas iyo fadeexadaas cid kasta oo ku lug leh waa in Sharciga la mariyaa xilkuu doono ha hayee. Hadii kale waxay noqonaysaa inay Xukumadeenu noqoto Tuug u gargaar. Madaxweyne u quus goo cidkasta oo ay ku cadaato fadeexadaasi, yaanay ka tirsanaan Xukumadaada hadii kale waxay keenaysaa in dhaca iyo boobka mucaawinooyinka loogu talo galay dadkeena baahani inay sii socoto. Hadii maanta abaari dhacdo waa ayo cida ku soo dhiiranaysa inay umadeena caawiso oo ay gacan siiso intii Ilaahay ka sokoysa.
Khayr qabayaashii soo diray mucaawinadani hadii ay maqlaan waa la dhacay, dib danbe u soo dirin maayaan mucaawiino danbe, waxaynu astaan u noqonaynaa dadkii maatidooda dhacayay halkii ay ahayd inay uga naxariistaan. Ilaahay ceebteena ha asturo, kuwaas falkaas ku kacayaana ilaahay ha soo hadeeyo oo xalaasha iyo xaaraanta ha kala tuso.